ကိုသင့်: ၈၈ ကို ပြန်ခေါ်ပါ
၈၈ ကို ပြန်ခေါ်ပါ
ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေ လူငယ်လှုပ်ရှားသူတွေ အကုန်လုံးနှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်တွေချမှတ် လိုက်ကြတယ်ဆိုတာ အာဏာရှင်လက်အောက်မှာတော့ သိပ်ထူးဆန်းတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီနေ့ နိုင်ငံရေး (သို့ ) အာဏာရှင်လက်အောက် အရှူပ်အထွေးမှာ တော်လှန်နည်းတွေ ပုန်ကန်နည်းတွေလည်း စုံခဲ့ပါပြီ.. နည်းပေါင်းစုံဖြစ်မလာခဲ့ပေမယ့် အသံပေါင်းစုံခဲ့ပါပြီ.. အခုကျနော်ပြောချင်တာကို စိတ်ဆိုးမလားတော့မသိဘူး.. ဘယ်လောက်ငြိမ်းချမ်းတဲ့ လူထုတော်လှန်းရေးမှ မရတော့ပါ. ဘယ်စစ်တပ်ကိုမှ မစည်းရုံးပါနဲ့မရပါ.. ရနိုင်တယ်ဆိုရင်လည်း မယုံပါ.. လူထုလှုပ်ရင် ပစ်မှာပါ.. ပြောချင်ပြောလိမ့်မယ် ပြည်သူသန်းပေါင်းများစွာကို ပစ်နိုင်မလားလို့ . သေချာတယ် အဲဒီအဆင့်ကိုမရောက်နိုင်ပါဘူး. လူထောင်နဲ့ ချီတဲ့လူတွေထောင်ချနိုင်ဖို့ဘယ်လိုရာဇ၀တ်အကျဉ်းသား မဆိုလွှတ်ပေးလိုက်မှာပါ.. စစ်တပ်ပါလာဖို့ လည်း မလွယ်တော့ပါ.. အဓိကအားပြိုင်တာ ဒုဗိုလ်ချုပ်မှူးတွေ ဖြစ်ကုန်ပါပြီ.. နောက်လာမယ့် ဗိုလ်တွေအရသာခံနိုင်ဖို့ လဲ ရှေ့ လူတွေကို အရပ်ဖက်ပို့ နေပါပြီ.. စစ်တပ်ရဲ့တပ်ဖွဲ့ စည်းပုံက အရမ်းချီးကျူးစရာတောင် ကောင်းနေပါတယ်.. လူထုပါဖို့ ဆိုတာ တော်လှန်ရေးရဲ့အခြေခံမို့ငြင်းမရပါဘူး.. ဒါပေမယ့် လူထုက ရွှေတိဂုံ ဆူးလေ ပတ်ပြီးလမ်းလျှောက်နေလို့ တော့ ဒီအခြေအနေမှာ မရတော့ပါဘူး.. စစ်တပ်ရိုးကို ဖြိုပစ်မှ နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်တော့မှာမို့လက်နက်နဲ့ပြည်သူ ရောပြွန်းပါမှ ထိန်းချုပ်ရေးကို ဖြိုဖျက်လို့ ရလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်.. ပြည်သူတွေ လက်နက်ကိုင်တိုက်ဖို့ ကို ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါ.. ပြည်သူလှုပ်ရှားမှုမှာ စစိရေးတွေရောပြွန်းဖို့ ပါ.. ကမ္ဘာကို ငြိ်မ်းချမ်းရေးအလှပြရုံနဲ့မရတော့ပါဘူး.. ဘယ်နိုင်ငံအစိုးရကမဆို နိုင်ငံရေးအမြင်နဲ့ ပဲ ကြည့်တာမို့ လို့ကိုယ်မသာရင် ဂရုစိုက်မှာမဟုတ်ပါဘူး.. အမေရိကမှ ပုဂ္ဂိုလ်တချို့ုလည်း နောက်နောင်တိုင်းခန်းလှည့်လည်ရင် ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မပြောပါနဲ့ကျောင်းသားတွေကို နှစ်ရှည်ထောင်ချတာရဲ့ရှေ့ ပြေးဟာ လူထုခေါင်းဆောင်အပေါ်မှာ ဘာလုပ်လာနိုင်မလဲဆိုတာတော့ ခဏလောက်ဖြစ်ဖြစ်တွေးတောကြဖို့ပြောလိုက်ပရစေ.. ကိုသင့်ပါ။။
Posted by သင့်ကင်း at 5:30 AM